Nyefee music si iPhone / iPad / iPod ka akporo ekwentị
Open TunesGo software ugbu na PC gị na site abụọ na ịpị na akara ngosi. Mgbe mmalite a n'ụlọ ihuenyo dị ka nyere n'okpuru ga-apụta.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ akporo ekwentị
Ugbu a ị chọrọ jikọọ gị akporo ekwentị gị PC eji a USB. Jikọọ otu njedebe nke Android ekwentị na ndị ọzọ na ndị USB n'ọdụ ụgbọ mmiri. Ozugbo ejikọrọ gị gam akporo ngwaọrụ ga-apụta n'okpuru "Ngwaọrụ" nhọrọ nke TunesGo ugbu na n'aka ekpe nke n'ụlọ ihuenyo. (Nseta ihuenyo egosi SamsungGT- I9300 dị ka ejikọrọ Android ekwentị)
Nzọụkwụ 3. Jikọọ iOS ngwaọrụ
Ugbu a ị chọrọ jikọọ gị iOS ngwaọrụ (iPhone, iPad ma ọ bụ iPod site na nke ị nke ị nyefee music ka Android ekwentị). Iji USB, jikọọ otu njedebe iOS ngwaọrụ na ndị ọzọ na njedebe PC. Ozugbo ngwaọrụ jikọọ, ọ ga-egosi n'okpuru Ngwaọrụ nhọrọ na TunesGo n'ụlọ ihuenyo on aka ekpe n'akụkụ. (Nseta ihuenyo na-egosi na ihuenyo na ga-apụta mgbe ejikọta iPhone, iPod na iPad karị)
Nzọụkwụ 4. Find songs
-Achọta ugbu a na songs nke nọ na gị iOS ngwaọrụ (iPhone, iPad ma ọ bụ iPod) site na ịga na "Music" nhọrọ ugbu na aka-ekpe-n'akụkụ nke TunesGo n'ụlọ ihuenyo n'okpuru ngwaọrụ gị aha. (Ihuenyo ogbugba egosi Music Atiya n'okpuru Yuki ekwentị)
Site nyere ndepụta nke songs, họrọ ndị na-ịchọrọ ị nyefee gị Android ekwentị. (Nseta ihuenyo egosi 3 songs dị ka họrọ ndị)
Nzọụkwụ 6. Export songs
Ugbu a gaa "Export Iji" ọrụ nke bụ ugbu n'elu mmanya nke TunesGo.
Ka ị na-emeghe "Export Iji" nhọrọ, ndepụta ngwaọrụ ga-apụta na site ebe a mkpa ka ị họrọ gị android ngwaọrụ. ((Nseta ihuenyo egosi SamsungGT- I9300). Na nke a họrọ songs ga-apụta n'okpuru Music nhọrọ nke gị android ngwaọrụ.
Wondershare TunesGo -Download, nyefee ma jikwaa gị music n'ihi na gị iOS / Android Devices
YouTube dị ka Your Personal Music Isi Iyi
Nkwado 1000+ Sites ibudata
Ọzọ: gam akporo na iTunes